"Vneshinturist" (मिन्स्क) जसको अनुभव साथीहरूले को एक समूह, सिर्जना गरेको पर्यटन व्यवस्थापन र विश्राम समयमा धेरै थियो। सँगै, तिनीहरू आज मानिसहरूको ठूलो संख्या को लाभ र आनन्द धेरै ल्याउँछ भन्ने कारण सिर्जना गर्नुभएको छ।
यसको बीचमा नेता
मिन्स्क मा "Vneshinturist" - यो बेलारुस को क्षेत्रमा पर्यटन को संगठनमा संलग्न सबै भन्दा उन्नत कम्पनीहरु मध्ये एक हो। को यात्रा एजेन्सी को धेरै ठोस प्रदर्शन देखाउँछ। "Vneshinturist" (मिन्स्क) यसको क्षेत्र मा नेताहरूको छ, देश को धेरै एजेन्सीहरू, संगठन टाढा र विदेशी बजार नजिकै संग सहकार्य। पचास भन्दा बढी देशहरूमा "Vneshinturist" (मिन्स्क) सहयोग।
कम्पनी पर्यटक यात्रा को संगठनमा संलग्न र दुनिया भर काम छ। पर्यटन व्यक्तिगत यात्री र समूहहरूको लागि दुवै सङ्गठित छन्। यो पनि मिन्स्क बस पर्यटन र हवाई यात्रा मा "Vneshinturist" संगठित गरे।
विभाग बीच तपाईं बुक र तपाईं चासोको विषय हुनेछ लगभग हरेक प्रमुख विमान एक विमान मा एक उडान गर्न अनुमति दिन्छ कि एक टिकट खरिद गर्न सक्नुहुन्छ।
"Vneshinturist" (मिन्स्क), साथै, यसको आफ्नै ट्रक छ। फ्लिट तपाईं देश वा विदेश यात्रा गर्न सक्छन् जो LIMOUSINES र ठूलो, सहज बसें, समावेश छ। विदेशी पर्यटक, "Vneshinturist" (मिन्स्क) द्वारा सेवा गर्दै बेलारुस र विदेश दुवै। भिसा समर्थन, होटल बुकिङ, कोठा सेवा र विदेश देश मा र विभिन्न घटनाहरूको संगठन प्रदान गर्न कम्पनी को विशेषज्ञहरु।
कम्पनी को एयर परिवहन संघ रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तर को संगठन मा सदस्यता को घमण्ड गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनी आदेश र ग्राहक सल्लाह को तयारी संलग्न छन् जो चार दर्जन व्यवसायीक छ।
यी मानिसहरू शिक्षित र interns विदेशी उड्डयन कम्पनीहरु छन् गरिएको छ। तिनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्रहरू र डिप्लोमा को धारकों छन्। आफ्नो काम पर्यटकहरुका लागि विमान टिकट र अन्य सेवाहरु को एक वैश्विक आरक्षण मा संलग्न छन् कि छ प्रणाली संलग्न।
ग्राहक कम्पनी "Vneshinturist" (मिन्स्क) संग संवाद खुला। संगठन वेबसाइटमा - जहाँ तपाईं आफ्नो सेवाहरू थाह प्राप्त गर्न सक्छन् स्पेस।
के कम्पनी गर्छ
यो संसारमा बेलारुस मार्फत र अन्यत्र यात्रा गर्न मौका प्रदान गर्दछ। पछिल्लो मिनेट, धेरै सस्ता खर्च हुनेछ एकदम सुरक्षित गर्न मौका छ। समुद्र समीर एक अद्भुत क्रूज जान भनिएको छ। विमान सही स्थान तपाईं पूरा गर्नेछ। सँगै सहकर्मीसँग, तपाईं उद्यम मोड मा एक छुट्टी व्यवस्था गर्न सकिन्छ। मिन्स्क होटल अग्रिम आफ्नो कोठा ध्यान अब बुक गर्न हुनेछ।
संग "Vneshinturist" संसारमा कहीं पनि पहुँच गर्न सकिन्छ। गर्म टर्की तट जानुहोस् र सकारात्मक भावना प्राप्त। मध्ययुगीन चेक तपाईं आफ्नो प्राचीन को गोप्य मोहीतपार्नु Name गरौं। बेलारुस को गणतन्त्र मा आफ्नो परिवार संग आराम, वा सबैभन्दा रोचक युरोपेली शहर भ्रमण गर्न आउनुहोस्। विकल्पहरू को ठूलो!
अनुभवी सलाहकार र प्रबन्धकहरू दयालु तपाईं अवधि, लागत र सेवाहरूको दायरा मामलामा आवश्यकताहरु आफ्नो पूरा हुनेछ भ्रमण चयन गर्न।
कम्पनी आफ्नो आला मा एक अग्रणी स्थिति ओगटेको छ। तपाईं originality र भ्रमण अपरेटर आफ्नो काम मा प्रयोग बनाउने प्रलोभन कदर हुनेछ। तपाईं र तपाईंको पति भने - खुसी नवविवाहितहरूका लागि संगठित चरणमा सुहागरात हुनेछ।
तपाईं आफ्नो परिवार संग छुट्टी मा भने, र यो मामला मा, तपाईं सबैभन्दा परिचालन सहायता प्रदान गरिनेछ हुनेछ। प्रेम चरम र साहसिक? त्यस्तो अद्भुत लागि रोचक दावी समाधान पाउन।
कम्पनी लामो समय सहायताको चाँडै र कुशलतापूर्वक तपाईंको अनुरोध प्रदान गरिनेछ त्यसैले, पर्यटन व्यवसाय को बजार मा गरिएको छ। तपाईंले लामो प्रतीक्षा छैन। मायालु प्रबन्धक आफूलाई मा सबै समस्या लिन र सही दिशा मा आफ्नो छुट्टी पठाउने।
गन्तव्य बिन्दु पनि उच्च चयन। तपाईं इटाली, क्युबा, ग्रीस, टर्की, इजिप्ट, मोन्टेनेग्रो, थाइल्याण्ड को सुन्दर समुद्री तट पर्खिरहेका छन्।
"Vneshinturist" को फाइदा सुरक्षित भण्डारमा जल परमिट भन्दा जो अन्य कम्पनीहरु छैन यस्तो प्रस्ताव, कि बोलाउन। तिनीहरूले एक पर्यटक विश्वव्यापी सबैभन्दा राम्रो र उच्च गुणस्तरीय रिसोर्ट्स पूरा गर्न तिनीहरूले सस्ता र थप रोचक छन्, बडा छन्। मूल्यहरु आफ्नो वालेटमा खाली छ खुसी हुनेछ। छूट र बोनस को लचिलो प्रणाली, विशेष गरी ठूलो कर्पोरेट समूहहरूको लागि।
तपाईं बस छुट्टी मा जान चाहनुहुन्छ? यस अवसरमा यहाँ सम्पर्क गर्न पनि निःशुल्क।
एक समूह वा व्यक्तिगत भ्रमण मा प्रारंभ। युरोप लागि प्रतीक्षामा छ। तपाईं र तपाईंको परिवार, धेरै सन्तुष्ट रहने एक राम्रो बाँकी र सकारात्मक शुल्क प्राप्त गर्नुहोस्। प्रत्येक camper व्यक्तिगत ध्यान र हेरविचार, उत्कृष्ट सेवा र हेरविचार को एक बिट प्राप्त गर्दछ। आफ्नो सबै इच्छा विचार लगिनेछ।
तपाईं अगाडि भ्रमण को जलिरहेको को विकल्प हुनेछ जब, तपाईं पनि सहयोग र समर्थन गणना गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनी मोल र उहाँको ग्राहकहरु प्रेम गर्नुहुन्छ। विशेषज्ञहरु निरन्तर, आफ्नो सीप सुधार नयाँ अनुभव प्राप्त, आत्म-शिक्षामा संलग्न छन्।
जब महत्वपूर्ण छन् पर्यटक प्रदर्शनी "Vneshinturist" सधैं तिनीहरूलाई भाग लिन प्रयासरत। यी घटनाहरू मा कम्पनी को सबै भन्दा राम्रो कर्मचारीहरु बेइजिङ, इस्तानबुल, लन्डन, मिलान, मिन्स्क पठाइएका छन्। कम्पनी पनि बेलारुस र विदेश यस्तो प्रदर्शनियों पकड को व्यापक अनुभव छ।
देश को पर्यटन व्यवसाय को भन्दा आफ्नो हात मा "Vneshinturist" धारण, यो उद्योग को brightest प्रतिनिधि हो। तिनीहरूलाई संकेत गर्न हरेक व्यक्तिको सपना पूरा गर्न - यो यात्रा एजेन्सी को मिशन।
एक यात्रा गुणस्तर सेवामा कारण तपाईं वर्ष आउन लागि सम्झना हुनेछ। सर्तहरू सहज। स्थानान्तरण तपाईं पनि लामो तिनीहरूले गन्तव्य मा आइपुग्दा अघि रमाइलो गर्न सुरु हुनेछ भनेर यस्तो तरिकाले बाहिर छ। के तपाईं संसारको नयाँ कुना भन्दा बढी पत्ता लगाउन हुनेछ!
आउनुहोस् र एक अविस्मरणीय छुट्टी छ!